Mgbe emechara mmemme | BLI
Mmụta dị ndụIhe gbasara mmekọrịta
Zute ndị mmadụ sitere n'akụkụ ụwa niileIhe gbasara mmekọrịta
Bli akwadorola gị usoro mmemme dị egwu nke na-eme kwa ụbọchị na ngwụsị klas gị.
Anyị na-akwado ụmụ akwụkwọ anyị niile ka ha gbasie ike na mmemme ahụ n'ihi na ọ bụ ụzọ iji hụ ndụ na ọdịbendị na Canada, ọ na-enyekwa gị ohere ịga ọtụtụ ebe kachasị amasị n'obodo ndị ụlọ akwụkwọ anyị dị. Na mgbakwunye, isonye na mmemme ọrụ anyị ga-enye gị ohere ịme asụsụ ị na-amụ na mpụga klaasị.
Ndị ọrụ anyị na-eduzi ihe omume ehihie ga-enyere gị aka ịmatakwu banyere obodo ị na-amụ.
N’oge ngwụsị izu anyị na-eme njem ụbọchị iji gaa n’obodo ndị dị ka Quebec, Montreal, Ottawa, Sgba ọsọ n’oge oyi, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, na ngwụsị izu iji gaa Toronto na Niagara Falls, Tadoussac na ọtụtụ ndị ọzọ!
Na BLI ị ga - ahụ ọrụ oge niile iji mee ka ị ghara ịna - arụ ọrụ ma mee ndị enyi ọhụrụ site n'akụkụ ụwa niile!
Bụrụ akụkụ nke njem ma debanye aha ugbu a! You ga-echekwa ahụmịhe ndị dị ịtụnanya ị ga-echeta ndụ gị niile.
Iji sonye na ihe omume ọ bụla, naanị debanye aha na nnabata, jụọ onye ọrụ ma ọ bụ jiri mpempe akwụkwọ ndebanye ọrụ anyị.
Kwa ụbọchị mgbe ọrụ ụlọ akwụkwọ gachara